Sida loo gaboobo sawir leh Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo gaboobo sawir leh Adobe Photoshop
Pablo Gonder | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
Photoshop-ka waxaa suuragal ah in dib loo kaydiyo sawir caadi ah oo la siiyo dhammaystir la mid ah kii hore.
Sida loo gaboobo sawir leh Adobe Photoshop hab fudud oo aad ku heli karto taabasho ka duwan sawiradaada. Qof kastaa wuxuu ka hadlayaa dib u soo celinta sawir hore, laakiin ka waran haddii aan dooneyno inaan ka hor tagno? da 'sawir taas oo si fiican u fiiqan. Waa la samayn karaa waxaadna baran doontaa inaad tan ku dhex samayso boostada.
Sawirka gabowga ahi waa wax aan ka badnayn natiijada ka soo baxda waqtiga kiimikooyinka kala duwan ee ku xardhan warqadda sawir qaadista, xeeladdu waa fiiri sida sawir duug ahi u eg yahay oo aad ku dabaqdaa isbedeladaas sawirro aan duugoobayn.
Ka waran haddii aan rabno inaan gabowno sawir intii aan dib u soo celin lahayn? ma qaban karno? haa haa, waan sameyn karnaa iyo waxaan ku sameyn doonaa laba qaab oo kala duwan tusida aalado ay ku awoodi doonaan inay ku sameystaan ​​muuqaal shakhsiyadeed oo gaboobay.
Arrintan post waxaan isticmaali doonaa aaladaha soo socda de Photoshop:
Lakabka hagaajinta: dhalaalka iyo kala-duwanaanta, midabka, dhererka, heerarka, madow iyo caddaan.
Waxaan baran doonaa waxyaabaha soo socda:
Beddel midabka sawirka
Ku dheji sawirka sawirka
Dib u soo cabiro xuduudaha aasaasiga ah sawir leh qalab casri ah
0.1 Eeg tixraacyada muuqaalka ah ee sawirradii hore
1 Qaabka koowaad ee da'da da'da
1.1 Lakabka hagaajinta midabka midabaynta
1.2 Ku dheji sawirka sawirka
1.3 Mugdi meelaha sawirka
1.4 Iftiiminta meelaha sawirka
2 Qaabka labaad illaa da'da sawirka
2.1 U beddel sawirka madow iyo caddaan
2.2 Beddel nalalka sawirka
Eeg tixraacyada muuqaalka ah ee sawirradii hore
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno markay tahay gabow sawir waa inaan ogaanno waa sidee sawir duug ah, tan waxaan ugu baahanahay tixraacyo muuqaal ah maxaan ka arki karnaa Google.
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah soo dejiso xoogaa qoraal ah si aad ugu dabaqdo sawirka ugana dhigto mid duug ah, tan waxaan u isticmaali karnaa nooc kasta oo ka mid ah image Bangiga ama si toos ah mid uga raadso Googleiyo hubinta inaad isticmaasho ikhtiyaarka sawir adeegsi bilaash ah.
Markaan horeyba uheysanay mid ama kabadan textures, waxa xiga ee aan sameyno waa fur sawirkeena Photoshop oo shaqo bilow. Waxaan u isticmaali karnaa nooc kasta oo sawir ah internetka inaan ku tababbarano ka hor intaannaan isticmaalin midkeenna, xaaladdan waxaan u adeegsannay sawir ka soo baxa filimka Naag Cajiib Ah.
Qaabka koowaad ee da'da da'da
Qoraalkan ayaan arki doonnaa laba siyaabood oo lagu da 'weydo sawir, qaabkan koowaad waxa aan sameyn doonno waa ku dheji sawir muuqaalkeena ah ixtiraamka midabka (kiiskan sepia tone) nooca xiga waxaan abuuri doonaa a nooc madow iyo caddaan ah.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan furno sawirkeena Photoshop.
Lakabka hagaajinta midabka midabaynta
Waxaan abuureynaa lakabka codka dhererka in la beddelo midabada sawirkeenna, xaaladdan waxaan siin doonnaa sawirkeenna a sepia orange tone. Si tan loo sameeyo waa inaan gujineynaa xulashada lakabka isku hagaajinta aagga lakabyada oo aan raadino lakabka hagaajinta midabka midabaynta. Lakabkaan gudahiisa waxaan ku riixeynaa sanduuqa midabka waxaanan badalnaa midabada sawirkeena sida aad ku arki karto sawirka.
Marka aan helno lakabka la abuuray, waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno waa mari codsi sawirkeenna si aan u helno saameyntaas duugga ah.
Si aad ugu dabaqdo sawirka sawirka, waxa kaliya oo aan sameyno waa jiidaan qaabkeena oo kor uga dheji muuqaalkeenna. Markaan helno muuqaalka kore ee sawirkeena waxa aan sameyn doono waa inaan bedelno kan qaabka lakabka ka caadiga ah oo lagu dhufto
Mugdi meelaha sawirka
Markii aan yeelano cufnaanta, waxa xiga ee aan sameyn doonno ayaa ah hooska mari si loo mugdiyo meelaha qaarkood ee sawirkeenna, waxa caadiga ah markaan aragno sawir duug ah ayaa leh meelaha ka madow.
Si loo helo mugdi meelaha qaarkood sawirka waxaan u isticmaali doonaa a lakabka hagaajinta gooladaha isku dhufashada qaabka lakabka, markaan haysanno lakabkan ayaan riixeynaa xakamaynta + i toobiye si lakabka loo rogo. Hawlgalka lakabkani waa mid fudud maxaa yeelay wuxuu u shaqeeyaa sida burushka oo kale, waxaan u badalnay qaabka adkeysiga burushka iyo dhumucda si aan ugu haboono muuqaalkeena. Ku habboon ayaa ah isticmaal mugdi hooseeya in isbedelka lagu sameeyo midba tartiib tartiib.
Ka dib markii mugdi ka galay aagagga muuqaalkeenna, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa ka soo horjeedka, cadee meelaha of our image.
Iftiiminta meelaha sawirka
Si loo caddeeyo aagagga sawirka waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah Abuur lakabka hagaajinta qalooca oo beddel qaabka lakabka ka caadiga ah ilaa weft, mar haddii aan helno lakabka aan riixno el xakamaynta toobiye + i si looga noqdo. Iyada oo gacan laga helayo burushka waxaan rinjiyeynaynaa meelahaas aan dooneyno inaan ku caddayno muuqaalkeenna.
Tallaabooyinkan ka dib Waxaan ku guuleysanay inaan gaboowno muuqaalkeena dhowr sano, sax? xaqiiqdii tobanaan sano.
Qaabka labaad illaa da'da sawirka
Qaabkan labaad waxaan ku badaleynaa kuweena madow iyo caddaan sawir in lagu dabaqo noocyo kale oo saameyn ah helitaanka sawir ka duwan.
U beddel sawirka madow iyo caddaan
Si sawirkeena loogu badalo madow iyo cadaan waxa ay tahay inaan sameyno waa sameyso lakab isku dheelitir madow iyo caddaan ah sawirka asalka ah.
Markii aan helno sawirka madow iyo caddaan waxaan bilaabi karnaa inaan adeegsanno lakabyada hagaajinta soo socda si aan u sii wadno gabowga sawirka.
Beddel nalalka sawirka
Qeybtaan waxaan ku badali doonnaa Iftiin iyo isbarbar dhig sawirkayaga si sawirka looga dhigo mid aad u ifaya sida haddii ay wax yihiin gubtay nal saa'id ah.
Waxa xiga ee aan sameyno waa beddel heerarka muuqaalka si aad uhesho nalalka iyo hooska si aad u qandaraas badan. Waxaan abuureynaa a heerarka lakabka hagaajinta oo waxaan ku dhajinaynaa xuduudaha sida aad ku arki karto qabashada.
Waxa xiga ee aan sameyn karno ayaa ah mugdi iyo iftiiminta aagagga abuurista lakabyo hagaajin ah ku dhufo qalooca qaabka iyo qaabka. Waxaan isticmaali doonaa lakabka hagaajinta qalooca isku dhufasho qaab lagu madoobaadoMeelaha muuqaalkeena, midka dhagarta waxa ay ku guuleysato waa in la caddeeyo.
Suurtagalnimada sawirada gaboobay aad ayey u kala duwan yihiin maxaa yeelay wax badan ayey ku xiran tahay waxa aan raadineyno, tallaabooyinkan yar yar waad ku guuleysan doontaa abuuro nooc kasta oo sawiro duug ah haddii aad bilowdo inaad ku jahwareerto xuduudaha dhammaan qalabka aan soo aragnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loo gaboobo sawir leh Adobe Photoshop
Qalabka lagu xusho sawirada Photoshop